नेपालमा नेता नै भएनन्: विन्दुनाथ लोहनी पूर्व उपाध्यक्ष, एडीबी
सेना र अदालतभित्रको आर्थिक अराजकताः प्रधानमन्त्रीको चुनौती
एक परोपकारी, तीन मूर्ति
साढे दुई करोड खेर गयाे रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा
समालोचनाका शास्त्रार्थी डा कुमारबहादुर जाेशीकाे सम्झना
परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण : बढ्यो भारतको भाउ
एमाले–माओवादी एकतामा दाहालको धरमर
सिण्डिकेटको पक्षमा अविवेकी आन्दोलन
इक्यानको अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित
‘तीन लाखलाई विद्यालय पुरर्‍याउने लक्ष्य छ’ (शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पाँच प्रश्न)
रुपन्देहीमा अपराधः भारत ‘कनेक्सन’ले झन् खतरनाक
चियाम्पेन: बगानदेखि कपसम्म
अस्तव्यस्त वैदेशिक रोजगारी, मालामाल दलाल
नेपालमा होण्डाले मनायोे ‘सम्बन्ध ५० वर्षको’
माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन निषेधको निर्णय फिर्ता गरः डा गोविन्द केसी
सागका केही खेल आयोजना गर्ने अवसर छ पोखरालाई
कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ मात्रै
त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै अवरुद्ध
शिक्षा नीतिमै राजनीति
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, भाद्र १३, २०७३
तस्वीर: बिक्रम राई
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) मा झण्डै तीन दशक लामो जागीरे जीवनबाट भर्खरै अवकाश पाएपछि डा. विन्दुनाथ लोहनी स्वदेश फर्किएका छन् । उनीसँग एशियाली देशहरूको ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, वातावरण, वित्त व्यवस्था तथा अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान र अनुभव छ ।
शुरुआतका केही वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका लोहनीले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर र बैंककस्थित एशियन इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरणीय इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अमेरिका, जापान, चीन, थाइल्याण्ड आदि देशका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धाता र भिजिटिङ प्राध्यापकको रुपमा समेत जोडिएका लोहनीसँग हिमाल का लागि किरण नेपाल र रमेश कुमारले नेपालको विकास र अर्थ सामाजिक विषयमा गरेको कुराकानीः
नेपालमा योजनाबद्ध विकास शुरु भएको ६ दशक भइसकेको छ । तर, विकासको अवस्था चाहिं कस्तो छ ?
यहाँ नबुझिएको कुरा के हो भने, नेता र राजनीतिज्ञ एउटै होइनन्, भिन्न हुन् । राजनीतिज्ञले पार्टीको दर्शन, नीतिअनुसार सोच्छ र पार्टी बलियो बनाउन खोज्छ । तर, नेताले पहिले देश र विकास सोच्छ । हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि ‘इकोनोमिक स्ट्यागनेसन’ जारी रह्यो । यसको मुख्य कारण मुलुकमा नेता नहुनु नै हो । राजनीतिक संक्रमणबीच पनि अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिइएको भए, राजनीति र विकास नमिसाएको भए यस्तो हुने थिएन ।
फिलिपिन्सकै उदाहरण हेरौं, नेपाल जस्तै फिलिपिन्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सबाटै आउँछ । एक चौथाइ जनता अझै गरीबीको रेखामुनि छन् । तर, त्यहाँ त विकासको प्रक्रिया रोकिएको छैन, आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत निरन्तर छ । त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई खासै प्रभाव पारेको छैन ।
मैले लामो समय चिनियाँहरूसँग काम गरें । उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा विकासप्रतिको दह्रो प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति थियो, जसका कारण निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । तर, नेपाली नेतृत्वमा जवाफदेहिता, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति केही पनि भएन ।
नेतृत्व अक्षमतासँगै अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको तर्क पनि बारम्बार गरिन्छ नि ?
अर्थतन्त्र विकासका तीन चरणमा हुन्छन् । पहिलो कृषि, दोस्रो उत्पादनशील र सेवा उद्योग । साना–ठूला उत्पादनशील उद्योगले अर्थतन्त्र अघि बढे पनि उच्च आय भएका मुलुकको सूचीमा पर्न उच्च प्रविधियुक्त उद्योग नै चाहिन्छ । दक्षिणकोरिया र थाइल्याण्डबाटै पाठ सिक्न सकिन्छ ।
कोरियाले उच्च प्रविधि आन्तरिकीकरण गर्दै दक्ष जनशक्ति विकास गर्‍यो र उच्च आय भएको मुलुक बन्यो । तर, थाइल्याण्डले प्रविधिलाई आन्तरिकीकरण गर्न सकेन । प्रविधि, लगानी भित्र्याउँदै आफूलाई मुनाफामै सीमित गर्‍यो ।
सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान युको किताब फ्रम थर्ड वल्र्ड टु फस्र्टः द सिंगापुर स्टोरी, १९६५–२००० मा विकासशील देशले कम गुणस्तरका धेरै सडक बनाउनुको साटो थोरै भए पनि गुणस्तरीय सडक बनाउनुपर्ने सन्दर्भ हाम्रा लागि पनि उपयोगी छ । नेपाललाई चाहिएको अहिलेको विकासको मोडल पनि यही हो ।
बाटो, विद्युत्, पानी जस्ता पूर्वाधार विकासमा फटाफट काम गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि सारै सजिलो छ । राजनीतिक तहमा विकासको विषयमा साझा मत र उचित नीतिले निरन्तरता पाउन सके नेपालले द्रूत गतिमा विकास गर्न सक्छ । जस्तो कि, विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको हामीकहाँ यस्तो नीति बन्नुपर्छ जसले बिजुली बाल्ने मात्र होइन, बढी खपत गर्न सक्ने उद्योग स्थापनामा पनि जोड गरोस् ।
भर्खरै नेपाल आएका एकजना कोरियाली अर्थशास्त्रीसँग भेट भएको थियो । उनी भन्दैथिए– कोरियामा योजना बनाउन १ प्रतिशत र कार्यान्वयनमा ९९ प्रतिशत ध्यान दिइन्छ । तर, नेपालमा उसको ठीक उल्टो रहेछ । नेपालमा ९९ प्रतिशत योजना बनाउन ध्यान दिइन्छ, १ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदो रहेछ । समस्या नै यही हो ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सफल देखिए पनि आर्थिक सुधारमा असफल हुनुको कारण हाम्रो विकासको अवधारणामै अस्पष्टता भएर त होइन ?
त्यसो होइन । नेपालको विकास अवधारणा ठीक छ । समस्याको जड योजना काममा अनुवाद नहुनु नै हो । कर्मचारी क्षमतावान छन् तर संरचनाले उनीहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्दैन । राजनीतिक अधिकारमा केन्द्रित हाम्रो आन्दोलन नागरिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भने कहिल्यै प्रष्ट हुन सकेन । अधिकारसँगै आउने जिम्मेवारीको हेक्का देखिएन । कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।
उदाहरणका लागि, यति वर्षभित्र यति ऊर्जा उत्पादन गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना छ, तर कार्यान्वयन अस्पष्ट छ । केही नीतिगत सुधार हुनेवित्तिकै सोलारबाट तत्काल केही सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।
कृषि, पूर्वाधार, उद्योग सबैमा यस्तै छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्ने तर भान्साका सबै चिज आयात गर्नुपर्ने । न उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छ, न ‘भ्यालु एड’ नै । कृषि सुधारमा थाइल्याण्डबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । हाम्रो प्राथमिकीकरण गलत छ । कार आयात गरेर धेरै राजस्व उठाउनेभन्दा ठूला यातायात ल्याउने, रुटमा सुधार गर्ने, एकाधिकार हटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार नै कारक रहेको आम मनोविज्ञान देखिन्छ, के यो नै सही हो ?
एडीबी, विश्व ब्यांक जस्ता दाता भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को अवधारणामा चलेका छन् । तर, भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुप हुन्छन् । समय र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नाफा आर्जेको रकम बाँडफाँड नै गरिए पनि त्यसले असर गर्दैन । कोरिया, जापान र अन्यत्र पनि केही हदसम्म बोनस बाँडफाँडको अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस विपरीत अभ्यास भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुनसकेको छैन । दाताहरूले यसैलाई औंल्याएका छन् ।
नेपालमा पैसा खर्च गर्न सजिलो छ । तर, आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । पश्चिमाहरूले गरीबी न्यूनीकरणमा लगानी गर्छौं भने, तर चिनियाँ मानेनन् । बरु, पूर्वाधार विकासका लागि फराकिला सडक बनाउन भने । यसो गरे किसानका उत्पादनले बजार पाउने उनीहरूको तर्क थियो, जुन अन्ततः सही सावित भयो । नेपालमा केही हुनेबित्तिकै रकम बाँड्ने मोडल छ, जुन सही होइन ।
त्यसो भए सही के हो त ?
पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिकामा जस्तो शर्तसहितको नगद वा गरीबका छोराछोरीको स्कूल शुल्क तिर्ने, अस्पतालको शुल्क तिरिदिने जस्ता कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । जनता सबैको ब्यांक खाता बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ, भारत र बंगलादेशमा त्यही गरिएको छ । अर्को चाहिं आर्थिक वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
फिलिपिन्स र थाइल्याण्ड जस्ता देश मध्य आयको उल्झनमा छन् । नेपालले अहिलेदेखि नै उच्च आयमा जान के गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । गलत आयोजनामा लगानी गर्नुहुन्न । समयानुकूल योजना, सफल कार्यान्वयन हुने हो भने सानोतिनो चुहावटले असर गर्दैन ।
हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अकर्मण्यता समस्याका रुपमा देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको आर्थिक सुधारको क्रम एकाध वर्षमै
रोकिएपछि मुलुकले अर्को चरणको सुधार गर्न सकेन भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो । सन् १९९० पछि एक चरणको सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्यो तर त्यसले निरन्तरता पाएन । जसले गर्दा आर्थिक मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो । सुधारको प्रक्रिया फेरि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् ।
नेपालको विकास सुस्तता सरकारसँगै विश्व ब्यांक, एडीबीसहितका विकास साझेदारहरूको पनि असफलता होइन र ? के यसबाट विकास
साझेदारहरूले नेपाल नीतिको समीक्षा गर्नुपर्दैन ?
परियोजनाहरूको विश्लेषण गरेर मात्र यसो भन्न सकिन्छ । कतिपय परियोजनामा दातापक्षबाटै समस्या नभएका होइनन् । ठेकेदार परिवर्तन हुने जस्ता कारणले पनि काममा ढिलाइ हुन्छ । हाम्रो जस्तै उनीहरूको पनि खर्चको लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्य पूरा नहुँदाको नोक्सानी एडीबी, विश्व ब्यांकलाई पनि पर्छ । दाताभित्रैको समस्या हटाउन एडीबीले प्रशासनिक ‘रिफर्म’ गरिरहेको छ ।
विकास साझेदारले पूर्वाधारमा भन्दा अन्यन्त्रै प्राथमिकता दिएका कारण पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको आलोचना पनि हुने गरेको छ नि ?
विकास साझेदारहरूले पूर्वाधारसँगै सामाजिक मुद्दा पनि हेर्ने रणनीति बनाएका हुनसक्छन् । त्यसैले कस्तो दातासँग काम गर्ने भन्नेबारे सरकारले आफैं निर्णय गर्नुपर्छ । देशको प्राथमिकताबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । दाता हावी हुन दिनुहुन्न । ‘सामाजिक मुद्दा हाम्रो आन्तरिक समस्या हो तिमी हात नहाल’ भन्न सक्नुपर्छ ।
दातासँग छरिएका साना होइन ठूला परियोजनामा ‘डिल’ गर्नुपर्छ । ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ वा पैसा होइन परियोजना बनाएर देऊ पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ । रोजगारी, सीप र लाभ हेरेर दाताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि सकिन्छ । खर्च अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टोली राख्नुपर्छ । चिनियाँ परियोजनामा अमेरिकी, जापानीमा चिनियाँ अनुगमनकर्ता राखे समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको भनाइको अर्थ, अहिलेसम्म दाताले नेपालको प्राथमिकता नभई दाताकै स्वार्थका आधारमा परियोजना सञ्चालन गरेकै कारण समस्या आएको भन्ने हो ?
दाता र सरकार दुवैका कारण समस्या उत्पन्न भएका हुन् । एउटै पक्षलाई मात्र दोष दिनुहुन्न । दाता व्यवस्थापनमा म चिनियाँ मोडल मन पराउँछु । चीनले सरकारी रकमले स्थानीय मापदण्डको पूर्वाधार बनायो, विदेशी पैसाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरको पूर्वाधार बनायो । यो सिकाइ प्रक्रिया पनि हो ।
दाताको शर्त गुणस्तरका लागि पनि हो । झट्ट हेर्दा यस्ता शर्त पूरा गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ तर यो दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
विश्व ब्यांक, एडीबीसहितका साझेदारहरूसँग नेपाली अधिकारीहरूको परियोजना छलफल कत्तिको प्रभावकारी पाउनुहुन्छ ? उदाहरणका लागि, एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) ले प्रस्ताव गर्दा समेत नेपालले परियोजना दिन नसकेको सुनिन्छ !
मैले सबै मुख्य र सहायक दाताहरू नेपालप्रति अत्यन्तै सकारात्मक पाएको छु । किन हो, नेपाललाई सबैले राम्रो देश भन्दै प्रेम गर्छन् । नेपालप्रति एक खाले ‘सफ्ट कर्नर’ छ ।
नेपालीहरू क्षमतावान छन् । तर, पैसा आउने भएपछि लिइहालूँ भन्ने गलत प्रवृत्ति पनि छ । प्राथमिकता नहेरी ‘डिल’ गरिहाल्ने पनि देखिन्छ । कुन परियोजनामा कसरी लिने भन्नेमा गृहकार्य पुगेको देखिन्न ।
जस्तो भारतले ५० मिलियन भन्दा कम खर्च गर्ने आईएनजीओ प्रवेशमा निषेध गरेको छ । तर, नेपाल भने आईएनजीओका लागि प्रिय देश हो । ८० प्रतिशत ओभरहेड र २० प्रतिशत काममा खर्च गर्ने आईएनजीओ राख्नुहुन्न । एडीबीमा मैले कतिपय यस्ता आईएनजिओलाई रोक लगाएको थिएँ ।
प्रसंग फेरौं, विश्व आर्थिक परिदृश्य फेरिंदो छ । चीनको पुनरोदयले नयाँ सम्भावना देखाएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा चीन र भारतबाट कस्तो लाभ लिन सकिएला ?
भारत र चिनियाँ कार्ड अहिले सान्दर्भिक छैन । चीन र भारत ठूला व्यापार साझेदार हुन्, त्यसैले नेपालले उनीहरूसँग लाभ लिन सँगै नबसी सुख छैन । हामी कुन देशबाट के चाहन्छौं यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।
चीन कृषिबाट उत्पादनशील उद्योगमा गयो । अब उच्च प्रविधियुक्त (हाई इण्ड) उद्योगतर्फ लाग्दैछ । भएका उत्पादनशील उद्योगहरूलाई विस्तारै पूर्वी एशिया र अफ्रिका पठाउन थालेको छ ।
हामी त्यस्ता उद्योग नेपाल ल्याउन सक्छौं । तर, सस्तो उत्पादन गर्ने (लो इण्ड) उद्योग भने भित्र्याउनु हुन्न । प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी, निर्यात, कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सहयोग हुने उच्च प्रविधियुक्त, अत्याधुनिक उद्योग चाहिन्छ । यसबारे गृहकार्य गर्न थाल्नुपर्छ ।
जस्तै, नेपालमै सगरमाथाको ढुंगा प्रयोग भएको घडी उत्पादन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १४ हजार डलरमा बिक्री हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मेड इन जापान घडी कसैले किन्दैनथ्यो, जर्मनी नै चाहिन्थ्यो । अहिले जापानको ब्रान्ड हेर्नुस् । हवाइजहाजबाट जाने थोरै भार भएको तर महँगा सामान बेचेर फाइदा लिनुपर्छ ।
चीनले एआईआईबी र वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अघि सारेको छ । कतिपय विज्ञले एआईआईबीलाई विश्व ब्यांकको विकल्प पनि भन्छन् । के यसले एडीबी, विश्व ब्यांकको लगानी नीति फेरिएला ?
एशियामा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । पूर्वाधारको बढ्दो माग धान्न सन् २०२० सम्ममा ८ ट्रिलियन डलर लगानी आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि नयाँ ब्यांक खुल्नु, वित्तीय सहयोगी हुनु सकारात्मक हो ।
१०० विलियन डलरको एआईआईबी स्थापना हुँदा नेपालले पनि पूर्वाधारका लागि रकम जुटाउन सजिलो पर्छ । तर, एआईआईबीको संस्थागत संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । जापान र अमेरिका अहिलेसम्म सदस्य भएका छैनन्, संस्थागत संरचना नहेरी यसको भविष्य भन्न सकिंदैन ।
ओबीओआर सिल्क रोडकै अर्को नाम हो । नेपाल हुँदै यो मार्गको मुख्य भाग नगए पनि प्रशाखा विस्तार गर्न पहल गर्न सकिन्छ । प्राविधिक, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक लाभको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।
महाभूकम्प लगत्तैको पुनःनिर्माण सम्मेलनमा तपाईंले द्रूत पुनःनिर्माणका लागि नीति, संस्थागत व्यवस्था र सुशासनलाई जोड दिनुभएको थियो । भइरहेको पुनःनिर्माणलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
इन्डोनेशिया, गुजरात, चीन आदिको अनुभवको आधारमा मैले त्यसो भनेको थिएँ । सरकारको विश्वसनीयता कमजोर भएकैले प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ थियो । दाता र जनता दुवैले पारदर्शी हिसाबले हेर्न सक्ने छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
रकम ल्याउनेभन्दा पनि प्रभावकारी पुनःनिर्माण गर्नसक्ने संस्थागत स्वरुप बनाउन जरुरी थियो । भत्किएको घरमा गाह्रो टाल्ने होइन, योजनाबद्ध वस्ती विकास, शहर निर्माण, पुनःनिर्माण गरौं भन्ने योजना हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुने छाँटकाँट देखिएन । निर्णय क्षमता युद्धकालको जस्तो हुनुपथ्र्यो । कार्यशैली बदल्न मैले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिएको थिएँ ।
चिनियाँ वा अरु देशसँग रकमभन्दा तिम्रै अनुभवले घर बनाइदेऊ भनेको भए हुन्थ्यो । चिनियाँले थ्री गर्जेजमा १० लाख मानिसलाई पुनस्र्थापित गरेको मैले देखेको छु । बुझ्नुपथ्र्यो, हामीलाई रकम होइन, पुनःनिर्माण चाहिएको हो ।
अनुभवी अर्थविद्को नाताले तपाईंले नेपालको आर्थिक सम्भावना र अवसरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारको विकासका कस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता हुनुपर्ला ?
म नेपालमा धेरै सम्भावना देख्छु । सांघाईको याग्फु नदीमाथि पुल छ । जियाङ जेमिन सांघाईको मेयर हुँदा विश्व ब्यांकले लगानी प्रभावकारिताका हिसाबले सुरुङ मार्ग सुझाएको थियो, तर जेमिन मानेनन् । उनको जवाफ थियो– सुरुङमा लगानी कम होला तर संसारकै लामो पुलबाट जनतामा नयाँ सम्भावनाको आशा देखिन्छ । नेतृत्वप्रति आशा जगाउनकै लागि सांघाईका कतिपय भाग अमेरिकाको न्यूयोर्कभन्दा राम्रो बनाइएको चिनियाँ तर्क छ । त्यसैले पनि भनिएको हो, नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजस्तो होइन, सीईओजस्तो हुनुपर्छ ।
नेपालमा करीब ४० प्रतिशत युवा छन् । उनीहरूलाई देशमा केही हुँदैन भनी निराश पार्नु हुन्न । आशा जागृत गराउनुपर्छ । यसका लागि नेतृत्वमा त्यस्तै क्षमता चाहिएको छ । अर्को चाहिं, बाहिर पढेका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारी सेवामा आउन चाहने धेरैका लागि लोकसेवाको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । अबको मेरो अभियान पनि त्यही आशा जगाउने नै हो ।
सोमवार, बैशाख १०, २०७५ सेना र अदालतभित्रको आर्थिक अराजकताः प्रधानमन्त्रीको चुनौती
सोमवार, बैशाख १०, २०७५ एक परोपकारी, तीन मूर्ति
आइतवार, बैशाख ९, २०७५ साढे दुई करोड खेर गयाे रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा
टिप्पणी परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण : बढ्यो भारतको भाउ
टिप्पणी एमाले–माओवादी एकतामा दाहालको धरमर
रिपोर्ट सिण्डिकेटको पक्षमा अविवेकी आन्दोलन
‘तीन लाखलाई विद्यालय पुरर्‍याउने लक्ष्य छ’ (शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पाँच प्रश्न) हिमालखबर
संघीयतामा संवेदनशील संरक्षण क्षेत्र डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
‘सिण्डिकेट र गैरकानूनी जालो तोडिनेछ’ (आइजीपी खनालसँग पाँच प्रश्न) हिमालखबर
शनिवार, बैशाख ८, २०७५ प्रजातन्त्रको मृत्यु
शनिवार, बैशाख १, २०७५ इन्द्रेणी कथा (पुस्तक चर्चा: भुइँखाट)
सोमवार, चैत्र २६, २०७४ टिभिएस जुपिटर क्लासिकका ग्राहकले नायिका प्रियंका कार्कीसँग हेरे ‘शत्रु गते’